Iinkonzo zethu - iYunis International Trading Co., Ltd.
I-Yiwu YUNIS IMP kunye ne-EXP CO., LTD yiarhente yokuthumela kwelinye ilizwe esekwe eChina iziko elikhulu lezorhwebo kunye nokusasazwa kwe-Yiwu. Sisebenza kwiarhente ye-Yiwu, iarhente yokuthumela kwelinye ilizwe i-Yiwu, iarhente yokuthenga ye-Yiwu. Kwaye benza uthotho lwenkonzo yokuthumela ngaphandle. Ukubhukisha okunje ehotele, ukwenza okokufunwa kwemveliso esikhululweni seenqwelomoya, ukuthengwa kwemveliso, ukuthengwa, ukuvavanywa kwempahla, ukugcinwa, ukubhengezwa kwamasiko eChina, ukulayishwa kwesikhongozeli, ukuthunyelwa kwelinye ilizwe (elwandle okanye ngenqwelomoya), ukulungiselela amaxwebhu okususwa kwamasiko njl.
Inkqubo yeenkonzo zethu:
Phambi kokuba ufike kwi-Yiwu
1. Kukucebisa elona xesha lilungileyo lotyelelo lwakho lweshishini ukuya eChina. Banike ababoneleli kwaye bakulungiselele iintlanganiso phambi kokuba uye eChina.
2. Ukukhupha i-China Invation letter (isimemo seshishini okanye isimemo esisemthethweni. Sinokukunceda malunga nemicimbi yevisa)
3. Bhukisha ihotele yakho ngesaphulelo esona sihle.
4. Iveni yesikhululo seenqwelomoya esuka e-Yiwu, e-Shanghai, e-Hangzhou
Ukufika kwakho kwi-Yiwu, qala ukuthenga kwakho
1. Kukukhokele ukuba utyelele iimarike zeemveliso ezichanekileyo kwaye undwendwele zonke iivenkile nganye nganye, okanye undwendwele iifektri ezilungileyo ukuba zilungile
2. Guqula kunye nothethathethwano ngamaxabiso phakathi kwakho nomthengisi
3. Qaphela iodolo, bhala zonke iinkcukacha ezinje: inqaku Akukho nkcazo, ubungakanani, ubungakanani, umbala, iinkcukacha zephakeji, imitha yeetyhubhu, kwangaxeshanye thatha iifoto zazo zonke iimpahla ozi-odoleyo.
4. Yenza ifom yoku-odola ukuba ujonge ixabiso, isixa esipheleleyo, iyonke imitha yeCube.
Emva kokuba ugqibile ukuthenga i-Yiwu
1. Beka iiodolo ezinemifanekiso yemveliso kubo bonke abathengisi
2. Landela yonke iodolo ukuqinisekisa ukuba ukuveliswa kwempahla kuya kugqitywa ngokwexesha lethu elilindelekileyo. Xela inkqubo inyathelo ngenyathelo
3. Indawo yokugcina simahla, siqokelela iimpahla kwindawo yethu yokugcina izinto kwaye sihlole iimpahla ukuqinisekisa ukuba iiodolo zihambelana neemfuno zakho.
4. Hambisa intlawulo yeempahla kubanikezeli bakho
5. Ngokwesicelo somthengi, indawo yokuthumela incwadi kunye nokucwangcisa ukuthunyelwa.
6. Lungisa amaxwebhu achaphazelekayo athunyelwa kumazwe angaphandle. Ukubhengeza amasiko ase China
7. Yenza amaxwebhu okungenisa elizweni langaphandle
8. Luthumele lonke uxwebhu kunye no-B / L ngokudlulisa uluvo lwakho, ukwenzela ukuba wenze imvume yokuNgena ngaphakathi.
Xa ungekho eTshayina. Singaba ngumncedisi wakho kwishishini othembekileyo
1.Ukuba unayo nayiphi na imveliso ufuna ukufumana e-China, siya kuzama ukukunika ikoteyishini ngexesha elifutshane.
2. Thumela ulwazi lwamva nje, oludumileyo nolunxulumene neemveliso kuwe.
3.Hlola iiodolo zakho. Ukuba uyalele kwezinye iifektri, singaya kumzi-mveliso kwaye sihlole umgangatho, ubungakanani, ukupakisha iinkcukacha kunye nazo zonke ezinye izinto. Kwaye emva koko uthumele ingxelo yokuhlola kuwe ukuqinisekisa ukuba i-odolo ngokwemfuno yakho.
4.dibanisa iimpahla zomthengisi ezahlukeneyo ezivela kwiindawo ezahlukeneyo kwindawo yokugcina izinto simahla.
1, YUNIS uye uthungelwano mveliso ngokubanzi kunye mveliso zethu ezintlanu .Ungathenga iimveliso kwixabiso mveliso.
I-2, i-YUNIS yamkela ii-odolo ezincinci / zetyala apho iifektri zivumela.
I-3, i-YUNIS QC yenenekazi ilandelela nazo zonke iiodolo ezibekwe ukulawula umgangatho.
I-4, i-YUNIS yamkela uyilo lwesiko kunye nemveliso.ODM, iprojekthi ye-OEM yamkelekile kakhulu.
I-5, i-YUNIS inokubonelela abathengi bethu ngexabiso lokuhambisa ngenqanawa njengoko sinamaqabane athembekileyo okudlulisa phambili.
I-6, i-YUNIS inendawo yethu yokugcina izinto kwaye idibanisa iimpahla zomthengisi ezahlukeneyo ezivela kwiindawo ezahlukeneyo kwindawo yokugcina izinto simahla.
Njengearhente yakho yokufumana i-Yiwu kunye ne-arhente yokuthumela kwelinye ilizwe, oko kuthetha ukuba uneofisi kwi-Yiwu / e-China, ke oko kungakongela ixesha kunye neendleko. Iinkonzo zethu aziphelelanga kwisixeko se-Yiwu, sinokukunceda wenze ishishini nakwezinye iindawo zase China. Sinikezela ngenenekazi eliguqulelayo lasimahla kwisikhokelo sentengiso. Yiwu YUNIS IMP & EXP Co., LTD lolona khetho lwakho!